स्वास्थ्यकर्मीकै उपस्थितिमा एसइई हुँदै — Raranews.com
विराटनगर, चैत ५ गते । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) यही चैत छ गते (बिहीबार) बाट सुरु हुँदै छ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सन्त्रासका बीच हुन गईरहेको उक्त परीक्षा अगामी चैत १७ गते सकिने छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय शैक्षिक योजना महाशाखा प्रमुख दिव्यराज कट्टेलका अनुसार प्रदेश १ मा ३७५ वटा परीक्षा केन्द्रमा ३७५ केन्द्राध्यक्षसहित ५४२ सहायक केन्द्राध्यक्ष तोकिएका छन् । त्यस्तै परीक्षा केन्द्रको सुरक्षार्थ प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा १५ जना सुृरक्षाकर्मी परिचालन गरिने छन् ।
प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा आईसोलेसन कक्ष
रङ्गेली समाचारदाताका अनुसार मोरङका प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरी परीक्षा अवधिभर विज्ञ स्वास्थ्यकर्मी समेत परिचालन गरिने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङले जनाएको छ ।
मोरङमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालनका लागि ७० केन्द्र तोकिएका छन् ।
कुनै विद्यार्थीमा स्वास्थ्य समस्या देखिए आइसोलेसन कक्षमा राखेर परीक्षामा सामेल गराईने छ । परीक्षामा सामेल हुन नसक्ने अवस्था आए तत्काल अस्पताल पु¥याउने प्रबन्धसहित परीक्षा केन्द्रहरुमा व्यवस्थापन मिलाइएको हो ।
मोरङमा एक्जाम्टेड र नियमिततर्फका समेत गरी १८ हजार ६७५ परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने इकाई प्रमुख चापागाँईले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये एक्जाम्टेडतर्फका २६७ जना परीक्षार्थीले विराटनगरस्थित जनता नमूना उमाविमा, नियमिततर्फ प्राविधिक धारका ४४६ जना परीक्षाले कबिर मा.वि. बेलबारी र आदर्श मा.वि. विराटनगरमा, परीक्षार्थीले परीक्षा लेख्नेछन् । त्यस बाहेक ६७ परीक्षा केन्द्रमा अन्य परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन् ।
जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकिय अधिकृत र सम्बन्धित शिक्षा शाखाका अधिकृतलाई परीक्षा अनुगमनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस बाहेक जिल्ला समन्वय समिति र शिक्षा इकाईबाट तोकिएका अधिकृतले परीक्षाको अनुगमनमा खटिने छन् ।गोरखापत्र दैनिकबाट ……
बागमती, गण्डकी र प्रदेश नं १ मा वर्षाको सम्भावना